နမ်းရှုံ့ခြင်းက ပေးတဲ့ ဝေဒနာ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နမ်းရှုံ့တာကြောင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ အကြောင်းကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပါးစပ်က အညစ်ပတ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လို့ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နမ်းရှုံ့တဲ့အခါ တံတွေးတွေ ကူးလူးသွားရာက ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ...
အရက်စွဲနေပါက အရက်ဖြတ်သင့်သည့် အကြောင်းပြချက်ကောင်းများ
၊ ကိုထက် ၊ လူအများစုဟာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့၊ ကြောက်ရွံ့စိတ်ပြေဖို့ စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ အရက်သောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အရက်သောက်ရင်း သောက်ရင်း အသည်းထိခိုက်တာနဲ့ အာဟာရဓာတ် ဆုံးရှုံးတာတို့လို နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ...
ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည် ဘာကို ရွေးချယ်မလဲ . .
ဇွန်ခိုင်ဦး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) နေ့စဉ် မနက်တိုင်း သောက်လေ့ရှိတဲ့ ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ရည်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင့်တော်ရာ ရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်ဖို့ သူတိုရဲ့ ကောင်းကျိုးအသီးသီးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်က နိုးကြားတက်ကြွတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ရချင်တဲ့အခါ လက်ဖက်ရည်ထက် ကော်ဖီက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။...
အချဉ်ထုပ်၊ ဆီး(ဇီး)ပေါင်းထုပ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုး
မေး. ကျွန်မသမီးလေးက အချဉ်ထုပ်တွေ၊ ဆီး(ဇီး) ပေါင်းထုပ်တွေ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချဉ်ထုပ်တွေက များများစားရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ တချို့မက်မန်းသီးတွေဆို စားလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်း၊ သွားနဲ့ လျှာတွေမှာ အနီတွေ စွန်းတတ်လို့ပါ။ မသီတာ၊ တာမွေ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်...
ပေါင်၂၀အလေးချိန်ရှိ ဦးခေါင်းကြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလေးငယ် ခွဲစိတ်ရန် မတတ်နိုင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှ နှစ်နှစ်သားအရွယ် အီမွန်ဟာ ပေါင်၂၀အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဦးခေါင်းကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ခေါင်းရဲ့အလေးချိန်ကြောင့် ကလေးငယ်ဟာ စကားမပြောနိုင်၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်ပြီး ခြေလက်တွေကို တောင်မလှုပ်နိုင်ပါဘူး။ မိဘတွေက အနီးအနားက ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသခဲ့ပေမယ့် မသက်သာခဲ့ပါဘူး။ ရိုးရာကုထုံးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပေမယ့်လည်း မထူးခြားခဲ့ပါဘူး။...
မိုးကျသော နေ့ရက်များတွင် ဆံပင်နှင့် အသားအရေ လှပကြည့်ကောင်းနေအောင် . . .
ငွေကြယ်စင်ယံ မိုးကျတဲ့နေ့ရက်တွေ ရောက်လာပါပြီ။ လူအများစုဟာ မိုးသည်းတဲ့အခါ အိမ်ထဲ၊ ရုံးခန်းထဲမှာ နေတာများကြပါတယ်။ စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အသားအရေနဲ့ ဆံပင်သားမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးတွင်းကာလမှာ အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပြောင်ပြီး ဆံပင်သား ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့ ပြောင်းလဲထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို...
သင် အိပ်ရေးပျက်နေတာ စားသောက်ပုံ မမှန်လို့လား . . .
အတွေးတွေ၊ သောကတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေမရှိဘဲ ညဘက် အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတဲ့အခါ စားသောက်တဲ့ ပုံစံမှားနေလို့လားဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) ညစာ စားတာ စောလွန်းရင် ညစာကို ညနေငါးနာရီလောက်က စားထားပြီး ည ၁၁နာရီကျော်တဲ့အထိ အိပ်မပျော်ရင် ဒါက...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မှီဝဲသင့်သည့် အရာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) – ကယ်လ်ဆီယမ် အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ နှမ်းစေ့၊ ပဲပုပ်စေ့၊ ရုံးပတီသီး စတာတွေမှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ဓာတ်ပါဝင်မှုများပါတယ်။ – ဗီတာမင် B6 ဗီတာမင် B6ကို သစ်ကြားသီး၊...
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးမည့် နှိပ်နယ်နည်းများ
ကိုထက် စိတ်ဓာတ်ကျနေသလား ခြေချောင်းထိပ်ကို နှိပ်ပေးပါ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ခြေချောင်းထိပ်လေးတွေကို ၃၀-၆၀ စက္ကန့်လောက်နှိပ်ပေးပါ။ အဲဒီအခါ ဦးနှောက်နျူရွန်ထဲက ဆီရိုတိုနင် (ပျော်ရွှင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဟော်မုန်း) အထွက်တိုးလာပါတယ်။ ဒီနှိပ်နယ်နည်းကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်ခန့် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ ပျို့ချင်အန်ချင်ဖြစ်နေသလား...
Page 469 of 596« First‹ Previous465466467468469470471472473Next ›Last »
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျပြီး နုပျိုကြည့်ကောင်းစေမည့် နေ့အချိန်လှုပ်ရှားမှု ၉ ရပ်
အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ မထိခိုက်အောင် နေထိုင်စားသောက်နည်း